iDVD nwere ike na-arụ ọrụ na Yosemite.
N'ihi na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-eji Yosemite dị ka a ndabere version nke Mac OS on ha na nwoke na ígwè ọrụ na-eche ihu njehie mgbe iDVD arụnyere na-arụ ọrụ na-gbalịrị. E nwere ọtụtụ mbipụta na njehie nke ndị a ọrụ ihu, ihe atụ ndị iDVD mgbe ọkụ na video n'ihi na onye ọrụ na-enye dị iche iche nke njehie nke ga-ọ bụghị nanị na-emetụta arụpụtaghị, ma ga-enweta a iji nwayọọ n'ozuzu arụmọrụ. Iji nweta onye ọrụ nke mbipụta na nsogbu nke yiri ụdị ọ na-gwara-aga site nkuzi na ndị niile dị mkpa akụkụ ina nke kpebiri.
Nkebi nke 1: Ndakọrịta mbipụta nke iDVD na Yosemite
Part 2: Gịnị bụ na e nweghị iDVD on ọhụrụ m Mac na Yosemite?
Nkebi nke 3: Olee otú iji nweta iDVD maka Yosemite?
Nkebi nke 4: Best iDVD ọzọ maka Yosemite
E nwere ọtụtụ mbipụta na nsogbu ndị na-a onye ọrụ chere ihu mgbe ọ na-abịa iDVD na Nchikota na Yosemite. Otu onye dị otú okwu a tụlere n'ime Apple forums ma ọ bụ nkwurịta okwu ahụ na ọ na-emi odude ke eri https://discussions.apple.com/thread/6649987?tstart=0. Nkọwa nke ikpe bụ dị ka ndị na onye ọrụ ikenye ihe bụ nsogbu MARCHELR.
Mgbe m arụnyere Yosemite m iMac, m kpebiri ịrụ a dị ọcha echichi, otú ahụ ka m furu efu niile m na ngwa. Ya mere, m na-agbalị reinstall iDVD ma apụghị m ịhụ ya AppStore. Dị ka m na-agụ, iDVD n'ezie adịghị egosi maka kpọmkwem echichi, otú ahụ, m arụnyere na ya si m iLife CD na emelitere ya version 7.1.2. Ma, mgbe m na-agbalị na-agba ya, ngwa freezes na m iwu na ịkwụsị ya (kasị nke oge, ike ịkwụsị) na relaunch ya. Ma, a sekọnd ole na ole (ma ọ bụ nkeji), ngwa amalite kefriza ọzọ na a na-eme na apụghị m iji ya.
M na-eche na ọ bụ abụghị nsogbu mere site enweghị ebe nchekwa, ebe ọ bụ na m nwere 16 GB arụnyere ebe a ...
Bụ ngwa dakọtara na Yosemite? Ọ bụrụ na ọ bụ, gịnị ka ị na-atụ aro ka m idozi a nke? Ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike na-atụ aro ọzọ mma DVD Okike?
E nwere ọtụtụ mbipụta nwere ike ime ka nsogbu nke e kwuru ka n'elu. Ụzọ kasị mma bụ iji hụ na ndị ọhụrụ iDVD omume arụnyere n'elu Yosemite ina nsogbu kpebiri. Ọ bụghị naanị na Apple ma niile ma ama na ụlọ ọrụ nke ụwa na-agba ndị ọrụ ha na-ọhụrụ nsụgharị nke ihe omume ka ha nwee ike ịrụ ọrụ functionalities na-elekọta ma na-ezu okè. Otu na-emetụta ebe a na azịza nke ajụjụ a e gwa a dị iche iche na eri nke e emelitere njirimara aha dị ka ochie awo. A na eri nwere ike hụrụ site-eme nchọgharị na URL
https://discussions.apple.com/thread/6639091 na azịza ndị dị mfe, doo anya na n'ụzọ kwụ ọtọ. Nanị ụzọ ga-esi n'ime ihe iseokwu dị ka e kwuru ma onye ọrụ bụ ka omenala wụnye iDVD na Yosemite Edition. Ọ na-atụ aro iji wụnye iLife 11. Nke a na usoro ka a wuru na iDVD omume nke ga-edozi nsogbu ahụ. Wụnye iLife 11 ga-akpaghị aka wụnye kwalite version nke iDVD na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara ka soro ntuziaka dị ka e kwuru nke mere na nsogbu nwere ike kpebiri ozugbo o kwere omume.
Ajụjụ a nwere ogologo azịza na ajụjụ onwe-ya ike na https://discussions.apple.com/docs/DOC-3673. Ọ bụghị naanị na onye ma ọtụtụ ọrụ na-mkpesa banyere nke na Apple Inc. e kere maka ha mgbe ọ na-abịa iDVD na yiri ọrụ na Yosemite. The mfe azịza nke ajụjụ a na Apple eburu na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ịzụta Mac akwụkwọ bụ ndị ọma gawa ma ha nwekwara ike imeli HSDPA brọdband ọrụ. Ọ bụ n'ihi otu ihe ahụ mere Apple Inc bụghị awa ọ bụla DVD ọkụ ngwọta mgbe ọ na-abịa Yosemite.To-eme ihe n'eziokwu ọ pụrụ maa egbochi n'ozuzu ịtụkwasị obi nke ụlọ ọrụ dị ka ndị ọrụ na-nke echiche na bụghị onye ọ bụla ná mba ọ bụla nwere ike imeli ụdị brọdband ọrụ otú ahụ iwu ga-chepụta ọzọ. E nwere otu nnukwu ọrụ isi nke Yosemite na ugbu a ọ bụla otu n'ime ndị a nwere na-adabere na brọdband njikọ iji hụ na mkpa videos na foto na-akọrọ remotely. Etolite anya ọrụ ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na e nweghị brọdband njikọ. N'ihi na ihe niile dị otú ahụ ọrụ nhọrọ kasị mma mgbe onye a bụ DVD ọkụ na ojiji nke ozi ozi nke kwesịrị-mere dị ozugbo o kwere omume nke mere na ndị ọrụ nke Yosemite nwere ike inwe a rie ude nke enyemaka na mmekọrita nke ihu.
Usoro a ga-soro bụ jụụ dị mfe ma na-eso nzọụkwụ ndị na-etinyere na-chọrọ results:
Nke mbụ niile onye ọrụ kwesịrị iji na-enweta ihe ọmụma na ndị okenye na nsụgharị nke iDVD ihe atụ iDVD7.1.2 ga-arụ ọrụ na Yosemite. Onye ọrụ kwesịrị gaa URL https://support.apple.com/kb/DL1414?locale=en_US inwe a version na otu ugboro hụrụ na ọ bụ ike ibudata n'ihu na usoro:
Faịlụ a na-ahụ ga-azọpụta:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka soro ntuziaka na họrọ mbanye mezue usoro na zuru nakwa ka ịnweta iDVD arụnyere na OSX Yosemite ọma. Na okwu ndị dị mfe ndị fọdụrụ nke usoro bụ otu ihe ahụ dị nke a nkịtị echichi nke iDVD ahụ bụ a ga-agbaso na-needful mere:
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Emi odude ke URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/ bụ otu nke kasị mma na omume na-ga-esi onye ọrụ nke hassles nke wụnye iDVD n'elu Yosemite. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke usoro ihe omume na-nke kpebiri n'ime chaachaa:
Ọ na-akwado n'elu 150 formats mere ọ dịghị nke na niile mgbe converting site na otu usoro ọzọ na ala na afọ ojuju
The media center e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume nyefee media seamlessly na enweghị ihe ọ bụla na-eduzi media
Akakabarede ọnụego bụ 30X ngwa ngwa ka tụnyere omume nke yiri genre.
Teknuzu nakwa dị ka echichi nkwado bụ egwu. Onye ọrụ nwere ike inwe nkwado 24/7 ozugbo usoro ihe omume arụnyere, irrespective nke version
The interface bụ kwa mfe iji na ọbụna a layman ga-isi nke usoro ihe omume na ala na afọ ojuju.
Olee otú Ọkụ egosi na TV ka DVD
> Resource> DVD> iDVD nwere ike na-arụ ọrụ na Yosemite.